गण्डकी प्रदेशमा अध्यादेशबाट बजेट ल्याईदै
May 26, 2021 N88LeaveaComment on गण्डकी प्रदेशमा अध्यादेशबाट बजेट ल्याईदै
काठमाडौँ, १२ जेठ । गण्डकी प्रदेश सरकारले असार १ मा नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने भएको छ । सो प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री किरण गुरुङले सो कुराको जानकारी दिएका छन् । तर प्रदेशसभामा सरकारको नीति तथा कार्यक्रमभन्दा पहिला मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङको परीक्षा हुनेछ । त्यसबखत मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिनसक्ने हुन् वा होइनन् ?अन्यौल नै […]
May 26, 2021 N88LeaveaComment on के हुन्छ यसपालिकाे एसईई परीक्षा ?
ः कोभिड–१९ का कारण स्थगित माध्यमिक शिक्षा परीक्षा, कक्षा १० (एसइई) बारे कार्यदलले काम गरिरहकाले दुई साताभित्र विभिन्न विकल्पसहित सुझाव तयार हुने भएको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माले कोभिडको दोस्रो लहरको प्रभाव कहिलेसम्म रहन्छ भन्ने स्पष्ट नभएकाले नयाँ शैक्षिक सत्र र परीक्षाबारे निर्णयमा पुग्न समस्या भएको जनाउँदै एसइईबारे एकदुई हप्ताभित्र […]
May 26, 2021 N88LeaveaComment on अस्पतालका स्वास्थ्यकर्मी र कर्मचारी तलबविहीन
कुस्मा । पर्वत अस्पतालका स्वास्थ्यकर्मी तथा कर्मचारीहरू पाँच महिनादेखि तलबविहीन बनेका छन् ।कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले टिएसए पद्धतिअनुसार खाता सञ्चालन गर्न भन्दै चालु अवस्थामा रहेको खाता सञ्चालनमा रोक्का गरेपछि उनीहरु तलब पाउनबाट बञ्चित बनेका हुन् । अस्पतालको नेपाल बैंक लिमिटेड पर्वत शाखामा राखेको खाता रोकिएको छ । काम गरेको लामो समय हुँदा समेत तलब […]
May 26, 2021 N88LeaveaComment on एस्टन भिल्लाको उत्कृष्ट खेलाडी घोषित भइन १९ वर्षीया अस्मिता आले मगर
काठमाडौं । इंग्ल्यान्डको वुमन्स सुपर लिगमा एस्टन भिल्लाको महिला फुटबल टोलीमा रहेर उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेकी नेपाली मुलकी १९ बर्षिय अस्मिता आले मगर एस्टन भिल्ला क्लबको ‘प्लेयर अफ दी सिजन’ घोषित भएकी छिन्। एस्टन भिल्लाको महिला फुटबल टोलीकी नियमित अस्मिता समर्थकहरुको मतदानबाट उत्कृष्ट खेलाडी चुनिएकी हुन्। अस्मिताले यस सिजन १९ मध्ये १७ खेलमा सुरुआती टिममा स्थान […]
अब टिकटकमा पनि युट्युवमा जस्तै पैसा कमाउन सकिने, यसरी गर्नुस् नेपालबाटै भेरिफिकेसन
May 26, 2021 N88LeaveaComment on अब टिकटकमा पनि युट्युवमा जस्तै पैसा कमाउन सकिने, यसरी गर्नुस् नेपालबाटै भेरिफिकेसन
काठमाडौं । अब टिकटकको अकाउन्ट नेपालबाटै भेरिफिकेसन हुने भएको छ । यसअघि भारतबाट टिकटक भेरिफिकेसन हुँदै आएकोमा अब नेपाली कम्पनीबाटै भेरिफिकेसनको काम हुने भएको हो । नेपालबाट सञ्चालन भएका टिकटक अकाउन्ट रिलिज नेपाल प्रालि नाम कम्पनीले ७ जेठदेखि फेरिफिकेसनको काम शुरू गरेकाे छ । रिलिज नेपाल टिकटकको नेपालका लागि कन्टेन्ट पार्टनर कम्पनी हो । अब […]
नेपाललाई काेराेनाकाे खोप दिन भन्दै अमेरिकी सांसदहरुसँग हिमानीले थालिन पहल
May 26, 2021 N88LeaveaComment on नेपाललाई काेराेनाकाे खोप दिन भन्दै अमेरिकी सांसदहरुसँग हिमानीले थालिन पहल
काठमाडौं । पूर्वयुवराज्ञी हिमानी शाहको नाममा उनकै नेतृत्वमा चलेको हिमानी ट्रष्टको अमेरिकास्थित कमिटीले नेपालमा कोरोनाको खोप अनुदानमा लैजान अमेरिकी सांसदहरुसँग लबिङ गर्दै अमेरकी सरकारलाई दवाव दिएको छ। मे २१ तारिख शुक्रबार हिमानी ट्रष्ट अमेरिकाका अध्यक्ष हरि शर्माको समन्वयमा सिनेटर मार्क वार्नरसँग भेट गरी नेपाललाई ७० लाख खोप उपलब्ध गराउनेबारेको स्मरण पत्र बुझाइएको थियो। […]
फेसबुकमा आफ्नो फोटो के अरुले सेभ गर्न नसक्ने बनाउन मिल्छ ?
May 26, 2021 N88LeaveaComment on फेसबुकमा आफ्नो फोटो के अरुले सेभ गर्न नसक्ने बनाउन मिल्छ ?
काठमाडौं । विश्वभर सामाजिक सञ्जाल फेसबुकका सक्रिय फेसबुक प्रयोगकर्ता झण्डै ३ अर्ब छन् । नेपालमा पनि दिनहुँ फेसबुकका प्रयोगकर्ता बढिरहेका छन् । प्रयाेगकर्ता बढिरहँदा कतिपयलाई आफ्नो गोपनीयता जोगाउने चिन्ता छ । यद्यपि प्रयोगकर्ताका लागि आफ्नो इच्छाअनुसार प्राइभेसी सेटिङका विकल्प यहाँ नभएका हाेइनन् । यसैबीच धेरै प्रयाेगकर्ताले साेधिरहने एउटा प्रश्न हाे, के फेसबुकमा आफ्नो फोटो अरुले […]
ओलीको बिरोध भैरहेको बेला नायक राजेश हमालले पनि दिए कडा जवाफ
May 26, 2021 N88LeaveaComment on ओलीको बिरोध भैरहेको बेला नायक राजेश हमालले पनि दिए कडा जवाफ
काठमाडौं । सार्वजनिक चासोको बारमो अभिनेता राजेश हमाल सितिमिति मुख खोल्दैनन् । लामो समय सामाजिक सञ्जालबाट टाढा रहेका हमाल सामाजिक सञ्जालमा ज्यादा जसो समय आफ्नो जिउ देखाउन रुचाउँछन् । उनले हाल्ने पोस्टमा आफ्नै फोटोको बाहुल्य हुन्छ । यदाकदा भने सार्वजनिक चासोको बारेमा पनि बोलेको सुनिन्छ । आइतबार साँझ हमालले लामो भिडियो पोस्ट गरे । भिडियोमा […]
योगेश भट्टराई र गोकर्ण विष्ट पनि नेपाल समूहका नेताहरूसँगै
May 26, 2021 N88LeaveaComment on योगेश भट्टराई र गोकर्ण विष्ट पनि नेपाल समूहका नेताहरूसँगै
काठमाडाैं । नेकपा एमालेका सचिव योगेश भट्टराई र गोकर्ण विष्टले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल समूहका नेताहरूसँग मिलेर वक्तव्य निकालेका छन्। केही दिनअघि प्रधानमन्त्रीमा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई समर्थन गर्ने नेपाल समूहको निर्णयमा भट्टराई र विष्टले सहमति जनाएका थिएनन्। तर विष्टले राष्ट्रपतिलाई राष्ट्रपतिलाई बुझाएको १४९ जनाको सूचीमा हस्ताक्षर भने गरेका थिए। खनाल-नेपाल समूहका २६ जनाले […]
May 26, 2021 N88LeaveaComment on राष्ट्रपति भण्डारीले फाेन गर्ने बित्तिकै चीनले गर्‍यो नेपाललाई खोप दिने घाेषणा
काठमाडौं । चीनले नेपाललाई तत्काल १० लाख डोज खोप नेपाललाई दिने घोषणा गरेको छ । चीनले नेपाललाई तत्कालै अनुदानस्वरुप नेपाललाई १० लाख डोज खोप अनुदानस्वरूप उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र सी जिनपिङबीच वार्ता भएलगत्तै चीनले सो घोषणा गरेको हो । सिनोफार्मले उत्पादन गरेको भेरोसेल खोप चीनले उपलब्ध गराउने जनाएको हो […]